ဆာလာရဲ့ စံခြိနျတငျခဲ့တဲ့ဂိုးဟာ ရယျစရာအဖွဈပကျြတှနေဲ့စခဲ့ပါတယျ…. – Premier League Special
ခနျြပီယံလိဂျမှာ အုပျစုဗိုလျအနနေဲ့ နောကျတဆငျ့ တကျထားပွီးဖွဈတဲ့ လီဗာပူးအသငျးကတော့ စီနီယာ ကစားသမား တျောတျောမြားမြားကို ဒီပှဲမှာ အနားပေးခဲ့ပွီး သကျသောငျ့သကျသာကစားသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ထူးခွားဖွဈရပျတဈခုကတော့ ပှဲအစ စက်ကနျ့ လေးဆယျမှာ အျောရီဂီ နဲ့ ဆာလာတို့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတဈခုပါပဲ။
တနျပွနျတိုကျစဈကနေ အျောရီဂီ က ဆာလာကို ဘောလုံးပေးပို့ခဲ့ပမေယျ့ ဆာလာဟာ ဘောလုံးလာတာကိုမကွညျ့ပဲ အရှကေို့ ပွေးဖို့သာစိတျထကျသနျနတောကွောငျ့ ဘောလုံးက ကနျြနခေဲ့ပွီး ဒီပေးပို့ခဲ့မှုဟာ အောငျမွငျမှုတဈခုမဖွဈခဲ့ပါဘူး
တှဈတာမှာလညျး ပရိသတျတှကေ ရယျစရာကောငျးတဲ့ ဗီဒီယိုတဈခု အဖွဈ မြှဝနေကွေပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီပေးပို့မှုဖွဈပွီး မကွာခငျမှပဲာ မဈဂလြေနျး က ကစားသမားက ဘောလုံးကို နောကျပွနျပေးပို့ခဲ့ရာမှာ အသငျ့ရှိနတေဲ့ ဆာလာ တောကျလြှောကျဆှဲပွေးသှားခဲ့ပွီး ဂိုးသမားနဲ့ တဈဦးခွငျးအတှမှေ့ာ ကနျသှငျးယူသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီဂိုးဟာ ဆာလာအတှကျ မှတျတမျးကောငျးနှဈခုရစခေဲ့တဲ့ဂိုးလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးယူခဲ့ဖူးသမြှ ဂိုးတှထေဲမှာ အမွနျဆုံးသှငျးဂိုးကို သှငျးယူနိုငျခဲ့သလို ဆာလာအနနေဲ့ လီဗာပူးအသငျးအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ သှငျးဂိုး(၂၂)ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့ပွီး ဂရြတျရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျသှားခဲ့ကာ အသငျးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဂိုးသှငျးအမြားဆုံး ကစားသမား ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
နညျးပွကလော့ပျကလညျးပှဲအပွီးမှာ ဆာလာနဲ့ပတျသကျပွီး”သူဒီညမှာ စံခြိနျတဈခုကိုခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့တယျဆိုတာကို ကြှနျတျောကွို မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုလုပျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ကြှနျတျောသူ့အတှကျ ဂုဏျယူခဲ့တာက သခြောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အတူတူအလုပျစလုပျခဲ့ကတညျးက မှတျတမျးတှေ အတျောတျောမြားမြားကို လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူက အသငျးကို ကွီးကွီးမားမား ကူညီပေးပွီး အသငျးရဲ့အကူအညီကိုလညျး အသိအမှတျပွုလေးစားရမယျဆိုတာ သိပါတယျ”လို့ ခြီးကြူးစကားပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဆာလာဟာ လကျရှိမှာတော့ အသငျးရဲ့ခနျြပီယံလိဂျ ထိပျတနျးဂိုးသှငျးရှငျစာရငျးမှာ တဈခွားသူတှနေဲ့ သူ့ရဲ့ကွားမှာ ကိနျးဂဏနျးတှေ အတျောကှာဝေးတဲ့အထိကွိုးစားခငျြနပေါသေးတယျ။ ပှဲအပွီး BT sport နဲ့ အငျတာဗြူးမှာလညျး ဒါကိုသူထညျ့သှငျးပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
“အသငျးအတှကျ ထိပျတနျးဂိုးသှငျးရှငျဖွဈရတာ အရမျးကောငျးတဲ့ ခံစားခကျြပါ။ အဲဒါက ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဂုဏျယူရမယျ့အရာပါ။ ကြှနျတျော ဒီဂိုးသှငျးနှုနျးအတိုငျး ဆကျသှားဖို့ လိုပါတယျ။ ဂိုးတှေ ပိုသှငျးယူပွီး ကြှနျတျောနဲ့ တခွားသူတှကွေားထဲက ကှာဟခကျြကို ကွီးမားလာအောငျ ပွုလုပျရမှာပါ။”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဆာလာရဲ့ စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ဂိုးဟာ ရယ်စရာအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့စခဲ့တာပါ….
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အုပ်စုဗိုလ်အနေနဲ့ နောက်တဆင့် တက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးအသင်းကတော့ စီနီယာ ကစားသမား တော်တော်များများကို ဒီပွဲမှာ အနားပေးခဲ့ပြီး သက်သောင့်သက်သာကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ထူးခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့ ပွဲအစ စက္ကန့် လေးဆယ်မှာ အော်ရီဂီ နဲ့ ဆာလာတို့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတစ်ခုပါပဲ။ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေ အော်ရီဂီ က ဆာလာကို ဘောလုံးပေးပို့ခဲ့ပေမယ့် ဆာလာဟာ ဘောလုံးလာတာကိုမကြည့်ပဲ အရှေ့ကို ပြေးဖို့သာစိတ်ထက်သန်နေတာကြောင့် ဘောလုံးက ကျန်နေခဲ့ပြီး ဒီပေးပို့ခဲ့မှုဟာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး တွစ်တာမှာလည်း ပရိသတ်တွေက ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု အဖြစ် မျှဝေနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပေးပို့မှုဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှပဲာ မစ်ဂျေလန်း က ကစားသမားက ဘောလုံးကို နောက်ပြန်ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ အသင့်ရှိနေတဲ့ ဆာလာ တောက်လျှောက်ဆွဲပြေးသွားခဲ့ပြီး ဂိုးသမားနဲ့ တစ်ဦးခြင်းအတွေ့မှာ ကန်သွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးဟာ ဆာလာအတွက် မှတ်တမ်းကောင်းနှစ်ခုရစေခဲ့တဲ့ဂိုးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းယူခဲ့ဖူးသမျှ ဂိုးတွေထဲမှာ အမြန်ဆုံးသွင်းဂိုးကို သွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ဆာလာအနေနဲ့ လီဗာပူးအသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး(၂၂)ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့ပြီး ဂျရတ်ရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ကာ အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးသွင်းအများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြကလော့ပ်ကလည်းပွဲအပြီးမှာ ဆာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး”သူဒီညမှာ စံချိန်တစ်ခုကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ကြို မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်သူ့အတွက် ဂုဏ်ယူခဲ့တာက သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတူတူအလုပ်စလုပ်ခဲ့ကတည်းက မှတ်တမ်းတွေ အတော်တော်များများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက အသင်းကို ကြီးကြီးမားမား ကူညီပေးပြီး အသင်းရဲ့အကူအညီကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုလေးစားရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်”လို့ ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆာလာဟာ လက်ရှိမှာတော့ အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဂ် ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်စာရင်းမှာ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ကြားမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေ အတော်ကွာဝေးတဲ့အထိကြိုးစားချင်နေပါသေးတယ်။ ပွဲအပြီး BT sport နဲ့ အင်တာဗျူးမှာလည်း ဒါကိုသူထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ “အသင်းအတွက် ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်ရတာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက် ဂုဏ်ယူရမယ့်အရာပါ။ ကျွန်တော် ဒီဂိုးသွင်းနှုန်းအတိုင်း ဆက်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ဂိုးတွေ ပိုသွင်းယူပြီး ကျွန်တော်နဲ့ တခြားသူတွေကြားထဲက ကွာဟချက်ကို ကြီးမားလာအောင် ပြုလုပ်ရမှာပါ။”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။